Kooxda Inter Milan oo u dhaqaaqday saxiixa Hector Bellerin - Radio Risaala: Somali News Online
Home Ciyaaraha Kooxda Inter Milan oo u dhaqaaqday saxiixa Hector Bellerin
Kooxda Inter Milan oo u dhaqaaqday saxiixa Hector Bellerin
Inter Milan ayaa lagu soo waramayaa inay xiiseyneyso inay la soo wareegto daafaca midig ee kooxda Arsenal Hector Bellerin.
25-jirkaan ayaa keliya sideed kulan oo Premier League ah saftay intii lagu jiray ololihaan dhaawacyada badan uu la maqnaa ee 2019-20, laakiin wuxuu ciyaaray 90ka daqiiqo oo buuxa afartii kulan ee ugu dambeysay ee kooxda Arsenal.
Daafacan ayaa qandaraas uu kula jiro kooxda ka dhisan Emirates wuxuu socan doonaa ilaa 2023, laakiin sida laga soo xigtay saxaafada Italy Antonio Conte ayaa u aqoonsaday xiddiga reer Spain inuu noqon karo saxiix macquul ah.
Warbixinta ayaa sheegeysa in Conte uu raadinayo da ‘yar bedela 33 jirka Antonio Candreva, isla markaana Mikel Arteta ay u badan tahay inuu xagaaga ku wareejiyo kooxda reer Talyaani ciyaaryahanka.
Intaas waxaa sii dheer, madaxa Inter Beppe Marotta ayaa la sheegay inuu kulan la qaatay Bellerin waqtiyadii hore, laakiin wax heshiis ah lama gaarin.
Bellerin ayaa dhaliyay sideed gool 195 kulan oo uu usaftay tartamada oo dhan waayihiisa kooxda Gunners.
Previous articleWararkii ugu dambeeyey xaalada Caafimaad ee Boris Johnson
Next articleQofkii ugu horreeyay oo Corona Virus ugu dhintay Muqdisho